Inona avy ny sehatry ny orinasa mpanamboatra latina avo lenta
Lohateny: inona ny sehatry ny asa ataon'ny mpanamboatra latina ambony kalitao ao amin'ny indostrian'ny milina CNC, ny mpamokatra fanodinana CNC mahazatra dia maniry ny hanao ny asa fanodinana ampahany vita amin'ny aliminioma, ny fanodinana ny varahina ary ny faritra sasany, izy ireo dia mandà ny hanaiky izany orinasa izany, ...
Mandra-pahoviana no haharitra amin'ny ririnina
Tamin'ny fanombohan'ny fihantsiana ara-barotra Sino US, ny indostrian'ny fanodinana fitaovana, toy ny indostria hafa, dia nanomboka ny ririnina mangatsiaka amin'ny toekarena. Indostria samihafa dia voaozona amin'ny valiny iray ihany. Ny orinasa rehetra dia tsy mety nefa tsy afa-manoatra hivoahana. Ny fifampiraharahana miverimberina momba ny ady ara-barotra any Sino ...
Ahoana ny fomba hanaovana asa tsara amin'ny fizotran'ny soldering ny radiator fantsom-panafana
Ny teknolojia fampidinana reflow dia dingana iray tena lehibe amin'ny fikirakirana ny radiator fantsom-panafana. Ny fampiharana ny haitao soldering reflow eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny fanamboarana elektronika dia tena midadasika. Ny tombony azo avy amin'ity dingana ity dia satria mora mifehy ny mari-pana, ny ...
Ahoana no amantarana ireo mpanamboatra faritra nohomboana avo lenta, inona ny antsipiriany tokony hojerena
Ny fomba hamantarana ireo mpanamboatra vy nohitsakitsahiko avo lenta dia tena ahiahin'ireo mpanamboatra maro. Ny habetsaky ny mpanamboatra fitoviana fitaovana dia manomboka amin'ny paompy iray ka hatramin'ny press isan-jatony. Ny tokonam-baravaran'ny indostrialy ambany dia iray amin'ireo antony mahatonga ny ampahany betsaka amin'ny fanidiana ny fitaovana ...
Fahasamihafana eo amin'ny foibe fanaovana milina iraisana sy ny foibe fanaovana milina haingam-pandeha NC
Raha ny marina dia tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ivon-toeran'ny milina fanodinana nentim-paharazana sy ny ivon-toeran'ny milina haingam-pandeha. Indrindra amin'ny fisehoan'ny fitaovana milina, tsy misy fahasamihafana eo amin'ny ivon-toeram-pamokarana haingam-pandeha haingam-pandeha sy ny ivon-toerana famokarana angovo ankapobeny. Inona ny int ...
Inona no mahasamihafa ny fanodinana lathe tsotra sy ny fanodinana fanaraha-maso isa
Inona no maha samy hafa ny fanodinana lathe tsotra sy ny fikirakira fanaraha-maso laharana isa amin'ireo fitaovana fanodinana mekanika marobe, ny fanodinana lathe mahazatra dia iray ihany koa amin'ireo fitaovana fanodinana mekanika izay naharitra ela indrindra ary tsy nesorina. Ny tena r ...
Fampitandremana momba ny indostria momba ny fangatahana talenta momba ny milina ao amin'ny orinasa fanodinana CNC
Ny olona izay nirotsaka tamin'ny indostrian'ny orinasa fanodinana CNC efa an-taonany maro dia tsy maintsy mahalala fa ny orinasan-tsolika fanodinana CNC marina dia nantsoina koa hoe orinasa mpanodina gong solosaina taloha. Tamin'ny taona 2000, olona marobe no niantso ny orinasa fanodinana CNC ho toy ny solosaina ...
Fandinihana prospecta ny indostrian'ny famokarana sy fanodinana mekanika
Raha ny fahitana ny toekarena eran'izao tontolo izao dia hafa ny toeran'ny famokarana mekanika sy ny fanodinana any amin'ny firenena samy hafa, fa ny ankamaroan'ny firenena dia mbola mihevitra ny famokarana mekanika sy ny fanodinana ho indostria mpamokatra ifotony ny firenena. Satria ny indostrian'ny famokarana fototra an'ny mec ...
Fomba fitantanana sy fikirakirana rafitra mpamokatra faritra mekanika hanatsarana ny tombotsoan'ny orinasa
Amin'ny indostrian'ny famokarana, ny mpamokatra mirotsaka amin'ny fikirakirana ny faritra mekanika dia sarotra kokoa amin'ny fandidiana sy ny fitantanana noho ireo ao amin'ny indostrian'ny elektronika, izay an'ny orinasa tsy dia misy tontolo iainana ary ambany ny fanabeazana. Ahoana no tokony hataon'ny faritra mekanika ...
Vahaolana amin'ny lesoka amin'ny milina
Ny olona efa niasa tamin'ny indostrian'ny milina nandritra ny taona maro dia matetika mihaona fa aorian'ny fametahana milina dia tsy azo antoka ny haben'ny vokatra ary tsy afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sary. Matetika izahay dia mamaritra ity tranga ity ho vokatry ny hadisoana tamin'ny milina. Ny fanesorana ny vokatra dia ...
Sarotra ny mandray olona amin'ny indostrian'ny milina. Taiza no nalehan'ny olona
Vao tsy ela akory izay, miaraka amin'ny taona vaovao, miatrika ny olan'ny fandraisana mpiasa ny indostrian'ny milina. Raha tsy misy baiko manahy, dia misy ihany koa ny manahy ny amin'ny fananana baiko, ary tsy misy mpandraharaha. Iza no hanao izany? Mino aho fa ity no feon'ny ankamaroan'ny milina fanodinana ...
Fikambanana inona no nisafidy marika radiator folo voalohany ao Guangdong
Araka ny fantatsika rehetra, amin'ny motera fikarohana rehetra, raha toa ka mampiditra ny laharana marika radiator folo voalohany ianao dia hisy valiny marobe, izay mahatonga ny olona te-hahita ny valiny amin'ny alàlan'ity fanampiana tsy afa-manoatra ity. Fa maninona no izao? Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny orinasa mpamokatra sinoa dia eo am-piandohana amin'ny ...